Dmenu နှင့် Rofi: WMs အတွက်ထူးခြားသော Application Launchers | Linux မှ
၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူဆက်လက် Application Launchers (Launchers)ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အလွန်အသုံးများသောအထူးအကြောင်း ၂ ခုအကြောင်းပြောပါမည် Window မန်နေဂျာများ (WMs)အတွက်ထက်ပို Desktop Environments (DEs)။ ဒီနှစ်ခုကိုခေါ်ပါတယ်။ Dmenu နှင့် Rofi.
သတိပြုသင့်သည်မှာအောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း linear နှင့်ရိုးရှင်းသော launchers များကဲ့သို့သော Dmenu y ရိုဖီ ထို့အပြင်အချို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် DE များ como Xfce။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဂရပ်ဖစ်နှင့်စွမ်းအားကြီးမားသောပစ်လွှတ်မှုများသည်ကြိုက်သည် အဲလ်ဘတ်, Kupfer, Ulancher နှင့် Synapse အချို့အတွက်အစေခံနိုင်ပါတယ် WMs များ အချို့တွေပေါ်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ထုတ်လွှင့်ဖို့ကြိုးစားပြီးကတည်းကငါသိထားတဲ့ရှိပြီးသားတွေ WMs များ.
အခြားသူများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်နှင့်လတ်တလောရေးသားချက်များကိုမတွေ့ရသေးသူများနှင့် / သို့မဟုတ်မဖတ်ရှုသူများအတွက် Application Launchers (Launchers)ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်အောက်ပါလင့်ခ်များကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ပြီးတော့များစွာသောအခြားသူများရှိပါတယ်သတိရပါ, Active နှင့်မလှုပ်မရှားလျှောက်လွှာ Launchersကဲ့သို့သော:
1 WMs အတွက်အကြံပေး Launchers: Dmenu နှင့် Rofi
WMs အတွက်အကြံပေး Launchers: Dmenu နှင့် Rofi
ဤသည်အလင်းနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ launcher ၎င်း၏အတွက်ဖော်ပြထားသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
"X အတွက်မူကြိုမီနူးတစ်ခု၊ မူလ dwm အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသော menu ပစ္စည်းများအမြောက်အများကိုထိရောက်စွာကိုင်တွယ်သည်".
အခြားသူများလိုပဲ WMs အတွက် launchers, Dmenu ဟာရိုးရှင်းပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ် အလွန်အမင်းသပ္ပါယ်နှင့်စိတ်ကြိုက်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်တတိယပါတီ၏ဖြည့်စွက်မှုများဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုဖွင့်ပါ ပရိုဂရမ်များ၊ နှင့် / သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသော အထူး command ကိုအမိန့် အတွင်းစတင်ခံရဖို့ configured အခါ WMs များ o DE များ ဘယ်မှာကကွပ်မျက်ခံရလိမ့်မည်။
ထဲမှာ ဇာတ်ညွှန်းအပိုင်း အချို့သောအလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော add-ons အချို့ကို၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကူးယူနိုင်သည်။ ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်များစွာသောကုဒ်များမှယူထားသည် configuration ဖိုင်များ (dotfiles) ဒီလူကြိုက်များတဲ့ launcher ၏စိတ်အားထက်သန်သောအသုံးပြုသူများနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းများကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါတကယ်ကနှင့်အတူပေါင်းစပ်ကြိုက်တယ် Fzf လျှောက်လွှာfuzzy search engine ၏ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက် command line ဖြစ်သည်။ ငါများသောအားဖြင့်ထည့်သွင်းသောအရာကိုသည် Fzf နှင့်အတူ Dmenu အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း command prompt ထဲမှာ၊
သူတို့ကိုငါအောက်ပါအတိုင်းအပေါ်ပေါင်းစည်းပါပြီ WM i3 လမ်းကြောင်းထဲမှာသက်ဆိုင်တဲ့ဖိုင်ကိုအသုံးပြုခြင်း «.config/i3/config»
ပြီးတော့ အသုံးဝင်သော setup ကို အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိရသော
နောက်ဆုံးအနေနှင့်သတိပြုသင့်သည် Dmenu သည်၎င်း၏ဗားရှင်း ၅.၀ ကိုသွားသည်။ သူ၏၌မှတ်တမ်းတင်ထားသောအဖြစ်အရာ, မကြာသေးမီက (02/09/2020) ဖြန့်ချိခဲ့သည် Git ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာတရားဝင်ဆိုက်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ Distro ၏ repositories မှ Dmenu ကိုမသုံးချင်ပါကယခုနောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤသည်ရိုးရှင်းသောပေမယ့်စွယ်စုံ launcher သူ့၌ဖော်ပြထားသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
"window changer၊ app launcher နှင့် dmenu အစားထိုးခြင်း".
အခြေခံအားဖြင့် ရိုဖီ ၎င်းသည်လက်ရှိမျိုးစုံသို့မဟုတ်လွယ်ကူစွာထည့်သွင်းထားသောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုပမာဏကိုရရှိခဲ့သည်၊ ရိုးရာကရေးသားခဲ့သည် Sean Pringleထို့နောက် Rofi သည် application launcher နှင့် ssh launcher ကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်သော repertoire များကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုအစားထိုးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Dropdown menu နှင့် / သို့မဟုတ် Dmenu.
ထို့ကြောင့် ရိုဖီသူ့ကိုကဲ့သို့တူညီသော Dmenu, သင်သည်အဆုံးအသုံးပြုသူတစ် ဦး နှင့်အတူပေးနိုင်ပါသည် GNU / Linux Distro, စာသားစာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောရွေးချယ်နိုင်သည်၎င်းတို့သည် application တစ်ခုအားကွပ်ကဲရန်၊ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း (သို့) ပြင်ပ script မှထောက်ပံ့ပေးသောရွေးစရာများမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူရွေးချယ်နိုင်သည်။
ရိုဖီ ၎င်းသည် install လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည် repositories အများစုတွင်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုများ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရိုးရှင်းသော command ဖြင့်ငါထည့်သွင်းခဲ့သည် MX Linux:
သင့်ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ GitHubအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး၎င်းသည်စာရွက်စာတမ်းကောင်းကောင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်ဆန်သည်။ သို့သော် Dmenu၊ သင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေရန်၊ စမ်းသပ်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ဖွဲ့စည်းမှုများသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုနှင့်အသွင်အပြင်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အမြဲစိတ်ချရသောအလည်အပတ်ခရီးသို့လည်းသင်လည်ပတ်နိုင်သည် ဝီကီ ​​Arch ပိုမိုသိရှိလိုပါက ရိုဖီ.
နောက်ဆုံးပုံ ၂ တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ Dmenu နှင့် Rofi ဥပမာအားဖြင့်၊ DE como Xfce.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဒီ ၂ ခုအကြောင်းအထူးအကြံပြုထားတဲ့လူသိများတဲ့စံပြ app launchers တွေအကြောင်း «Dmenu y Rofi», များသောအားဖြင့်ကြီးမားသောအသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်းများက၎င်းတို့အကြောင်းကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည် Window မန်နေဂျာများ (WMS) ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အခြားသူတွေ၏ Ulauncher, Synapse, Albert နှင့် Kupfer; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Dmenu နှင့် Rofi - WMs အတွက်ထူးခြားသော App Launchers ၂
ငါ dMenu- တိုးချဲ့ (တစ် ဦး ထက်ပိုသောပြည့်စုံသော dMenu) ကိုအသုံးပြုပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ အခြား launchers များနှင့်မတူသည့် dMenu (နှင့် Rofi) ၏အားသာချက်သည်သင်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်အရင်းအမြစ်များ (နှင့်အနည်းငယ်မျှသာ) ကိုသာသုံးစွဲသည်။ အခြားသူများကသင်အသုံးမပြုလျှင်ပင်အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲနေသည်။
Pedruchini ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ သင်၏မှတ်ချက်နှင့်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ Dmenu တိုးချဲ့မသိခဲ့ပါ, ဒါကြောင့်ငါစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ link ကိုထားခဲ့ပါ:
ငါသူတို့ထဲကအတော်များများကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အမှန်တရားကငါ့ကိုမယုံဘူး၊ ငါနဲ့မသင့်တော်တဲ့အရာအမြဲတမ်းရှိတယ်။ ငါသုံးသောတစ်ခုတည်းသော၊ ငါကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်မြန်ဆန်ခြင်း၊ သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်ဤစာရင်းတွင်မပါဝင်ပါ။ ggrun နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော jgmenu ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ, M13 ။ သင်၏မှတ်ချက်နှင့်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းပြောခဲ့တာကိုငါစုံစမ်းမယ်။
သူတို့က Fedora SCP protocol ကိုကန့်ကွက်ရန်နှင့်ဖယ်ရှားရန်အဆိုပြုထားသည်